China API610 ANSI Chemical Process Standard Petrochemical Heavy Crude Fuel Oil Transfer Pump mveliso kunye nabenzi | IsiTongke
I-API610 ANSI yeNkqubo yeMichiza esemgangathweni yePethemhemical Heavy Crude Fuel yokuGqithisela i-Pump
Umzekelo No .: ZA
Impompo processing ZA series ethe tyaba, singe isigaba, umva ukutsala-out uyilo, badibana uguqulelo 10 ANSI / API610-2004.
Ukugqithisela okucocekileyo kunye nokuncinci okungcolileyo, amaqondo asezantsi kunye aphezulu, ikhemikhali engathathi hlangothi kunye nolwelo olonakalisayo.
Uchungechunge lwe-ZAO lukwi-casing radial split, kwaye iintlobo ze-OH1 zeempompo ze-API610, i-ZAE kunye ne-ZAF ziindidi ze-OH2 zeempompo ze-API610. Izinga eliphezulu lokuphakama okuphezulu kweHydraulic kunye neebheringi ziyafana ne-ZA uthotho lwe-ZAE; Impeller luhlobo oluvulekileyo okanye oluvulekileyo, oluhambelana neplate enganyangekiyo ngaphambili nangasemva.
Kusebenza ngokudlulisa ulwelo olwahlukeneyo ngezixhobo eziqinileyo, ze-slag, viscous fluid njl.
Shaft nge shaft sleeve, ikude ngokupheleleyo kulwelo, thintela ukubola kwe-shaft, iphucula ubomi bempompo. Imoto inokudibanisa uvalo olwandisiweyo, ulondolozo olulula nolumnandi, ngaphandle kokuthatha imibhobho kunye nemoto.
Ukucokisa, ishishini leekhemikhali zepetroli, ukulungisa amalahle kunye nobunjineli bobushushu obusezantsi
Umzi mveliso weKhemikhali, ukwenziwa kwamaphepha, umgubo, iswekile kunye nokunye okufana nomzi mveliso oqhelekileyo
Ityuwa yamanzi olwandle
Inkqubo yokuncedisa yesitishi samandla
Ubunjineli bokukhusela indalo
Iinqanawa kunye nobunjineli bolwandle
Egqithileyo Uxinzelelo oluphezulu lwamanzi acocekileyo kwimpompo ye-cent Electrifugal
Okulandelayo: Injini yedizili yeXesha elide iSheft eyi-Turbine yoMlilo
Olu hlobo luyi-API610 OH1, i-OH2 yohlobo lweempompo ngoxinzelelo.
Umthamo ukuya kuthi ga kwi-2600 m3 / h
Intloko ukuya kuthi ga kwi-300m
Ubushushu boTywala -80 ~ 170 ºC
Uxinzelelo lokusebenza ~ 2.5 MPa (Iinkcukacha ziya kubhekisa kwimizobo ye-PT, ngokweqondo lobushushu elahlukileyo ukukhetha izinto ezifanelekileyo)
Ukugqithisela okucocekileyo kunye nokuncinci okungcolileyo, amaqondo asezantsi kunye aphezulu, ikhemikhali engathathi hlangothi kunye nolwelo olonakalisayo. Ukucokisa, ishishini leekhemikhali zepetroli, ukuqhubekeka kwamalahle kunye nobunjineli bobushushu obusezantsi.
Umzi mveliso weekhemikhali, ukwenziwa kwamaphepha, umgubo, iswekile kunye nokunye okufana nomzi mveliso oqhubayo;
Indawo yokuhambisa amanzi kunye netyuwa emanzini;
Ubushushu ubonelelo ngenkqubo yomoya;
Inkqubo yokuncedisa yesikhululo samandla;
Ubunjineli bokukhusela okusingqongileyo;
Iinqanawa kunye nobunjineli bolwandle.
CZ Horizontal Single Stage End sokufunxa Centrifu ...